Nri vine | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Atiya Nri vine
Na-elekọta mkpụrụ vaịn n'oge mgbụsị akwụkwọ: iwu na ndụmọdụ
N'oge mgbụsị akwụkwọ, osisi vaịn kwesịrị nlekọta anya. O nyela ike ya niile ka ọ bụrụ ihe ọkụkụ ahụ, ọrụ isi nke onye na-ere nri bụ iji kwadebe ihe ọkụkụ ahụ maka oge oyi. N'ezie, ị nụla ihe karịrị otu ugboro na n'otu ebe, mkpụrụ vaịn na-eto eto, na na agbata obi ya bụ oge oyi. Gịnị mere o ji dabere, n'ezie, naanị na ụdị?
Mkpụrụ vaịn na ụbịa bụ ihe dị mkpa ma dị oke mkpa.
Ndị bi n'oge okpomọkụ nwere atụmatụ ịkụ ihe na saịtị ha. Osisi vaịn bụ osisi nke na-achọpụta na ọ na-emepụta ala, ma na-ewetakwa uru site n'uto ya. Mkpụrụ vaịn bụ ihe ọkụkụ n'oge ochie na ndị mmadụ na-azụlite. A na-achọta ebe a na-akọ osisi a n'oge ochie, na mpaghara dị n'akụkụ Oké Osimiri Mediterenian, na Crimea na n'Ebe Etiti Eshia.